Löfven oo ku adkaystay hadalkiisa, diidayna in uu cambaareeyo Israel | Somaliska
Löfven oo ku adkaystay hadalkiisa, diidayna in uu cambaareeyo Israel
Gudoomiyaha xisbiga Socialdemokraterna (S) Stefan Löfven ayaa ku adkaystay hadalkii uu ku qoray bogga Facebook ee uu taageerada ugu muujiyay Israel. Isaga oo la hadlay wakaalada TT ayuu sheegay in hadalkiisa uu ku dhisanyahay siyaasada xisbigiisa.
“Hadalkayga waxa uu ku salaysanyahay siyaasada xisbiga ee aan marar badan ka dhawaajinay.” ayuu yiri Löfven, Isagoo ka leex leexday markii la waydiiyay sababta uusan u cambaareyn Israel. Mar wax laga waydiiyay in Israel ay u jabisay sharciyada dagaalka ayuu sheegay in taasi su’aal laga keeni karo.
Wariyaha ayaa waydiiyay in uu cambaareynayo Israel iyo in kale isagoo ku jawaabay: Waxaan cadaynayaa in ay xaq u leeyihiin in ay isdifaacaan laakiin waa in ay raacaan sharciyada caalamiga ah.
Dhinaca kale ayuu Löfven eedeyn u soo jeediyay dadkii fariimaha ugu reebay Facebook isagoo qaarkood ku eedeeyay in ay muujiyen naceyb ka dhan ah Yuhuuda. Waxa uu sheegay in ay bogga ka tireen qaar ka mid ah fariimihii loo reebay.
Löfven ayaa u muuqda nin aan dan kala hayn codka Muslimiinta Sweden, isagoo taageeradiisa Israel laga dheehan karo hadalkiisa. In Soomaalida iyo Muslimiinta ku nool Sweden ay codkooda siiyaan ninkaan iyo xisbiga uu matalo ayaa noqon doonta dambi weyn oo laga galay shacabka Gaza ee nooga baahan taageerada.
Soomaalida indho la’aanta u taageeri jirtay xisbiga Socialdemokraterna (S) iyo kuwa xubnaha ka ah ee ololaha doorashada u sameeya waa in ay ka fiirsadaan ficilkooda. Oo aysan u shaqayn ninkaan iyo inta ku fikirka ah.
Wadanka waxaa ka dhisan xisbiyo kale oo taageero u muujiyay shacabka Gaza isla markaana wax la taaban karo u qabtay Soomaalida Sweden. Xisbiyadaas waxaa ka mid ah xisbiga Vänsterpartiet iyo Miljöpartiet (MP) iyadoo gudoomiyaha xisbigaas Gustav Fridolin uu si aan leex leexasho lahayn u cambaareeyay Israel, eedana dusha ka saaray iyaga.
Maxkamada Socdaalka Malmö oo gacan furan
Dowlada KMG & Sweden oo ka wada hadlay baasaboorka Soomaaliga
Video: “Gudniinka fircooniga ah caafimaadka ayuu u fiicanyahay”
July 15, 2014 at 07:11
social demokraterna somali ayeyna doraan , ayaan laa ilobiin codaynta so socota dambi haa kaa galina gaza iyo muslinka idinku aad kaa mid tihiin wayo siyasaad ku dhisaan israel waa ay ino daraan tahay xataa anaga musliminta eeh ku nool dalkaan
walaalyaal horta waan idin salaamay dhamaantiin inta weebkan kuxiran,kadib. walaalayaal waxaan idinka codsanayaa in aannan u codeenin kuwan yahuuda taageersan, waa hadii aad ka xanuunsanaysaan dhibaatada walaalheen lagu hayo oo gaalkaana uu leeyahay xaq beey uleedahay yahuuda ineey is difaacaan ,dhiiga walaalaheena saas loodadinayo. intaas un aan sameeno waxkale oon uqaban karno oon ka aheen in aan walaalaheen uduceeno
wilka somali says:
July 15, 2014 at 15:39
maanta laga bilaabo wan kabaxay codkaygiina siinmaayo xisbiga socialka
hubsiino halba lasiistaa, kolay isma dhaamaan lkn kuwaakale ayaanu siindoona codka insha allaah
July 15, 2014 at 23:09
Sxb yaal aan u codeeyna Miljopartiyeet maadama eey yihiin kuwii u olaleeynayay isku keenta reeraha Somalida. taasna weey ku guleesteen 2012.
Marka abaalka yaan la hilmaamin ayaan dhihi lahaa.
July 16, 2014 at 02:53
Waa Muhiim inaan kafakarnaa socialdemokraterna, nin Xabad iyo gaajo heysato nin kanixi waayay adna kuu joojin maayo
July 17, 2014 at 03:48
Dhibku jiraa waxa weeyi somalidu waxba ma akhristaan qofku haduunu whebsitka iyo wararka caalamka akhrisan waxba ma ogaan karo waynay u codaynayaan waayo maba ogoba danbiga uu ka galay gaza
July 17, 2014 at 08:32
asc dhamaan umadha somaliyeed midakale allaha unaxariisto intii kudhimatay iyo intii ku dhaawantay allaha caafiyo muwaadiniinta qasa iyo xamaas kuwa noolne dhib dabe illaaheey ma tuso . mida ah siyaasada swedhan waxaan idiisoo gudbinayaa laba quraal keebaa qaldan ii sheega sxbyaal waxa kala qurey 2 qof ?
Macloow Mushaani says:
July 19, 2014 at 11:16
Run ahaantii waqtigaan la joogo Aduunka oo dhan waxaa u Atoore ah USA, Laakiin Filinka bilyeetigiisa waxaa gooya Israel. Marka Hadii aan nahay Soomaali Codkeena meel ma jiro, nin dhageysanaayana ma leh marka ay noqoto Arimaha Israel iyo kuwo kale. Marka Löfen Hadalkiisa waxaa ka horeeyey Wadamo badan oo ugu horeeyo USA. Marka nin bariiskiisa caro isaga shubaayo maleh. Xiyaa Hamas waxaa ay diideen ineey gantaalaha joojiyaan, Ayagoo aan waxba awood leheen. Marka Soomaalida ku nool Sweden waxaan leeyahay garta dantiina . Suaal quseeso Israel ama USA danihiina ha u baabi inina ama ha dhihina ma dooranaayo Löften ama xisbiga socialka. Hadii uu xisbiga socialka dantaada aheyn ha dooran. Laakiin Arinta Gaza shaqo kuma laha doorashada. Kaasi waa ra,yigeyga qaaska ah qof aan ku xumeynaayo maleh wabilaahi towfiiq.
Macloow Mushaani waxaad tahay bahal damiirku ka dhintay oo jixin jix lahayn’ waar yuhuuda iyo cidii taageerta hasoo kala dhawaysan Dan lahayne . Kolay wax ma tare Sweden Caydh Ku qaataad tahaye aakhiradaada u tudho ha iska NAC NAC layne.